Indlu yeBoathouse-iLakeside Cottage
North West, eMzantsi Afrika
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguNicholas
Indlu entle esecaleni kwechibi ephakathi kwemithi emibini emide, ijonge awona manzi acocekileyo eMzantsi Afrika. I-rustic cottage lilitye elifihliweyo elizaliswe yiyo yonke into umntu anokuyidinga kwimpelaveki ezolileyo okanye ukubaleka kwezothando. Idityaniswe kunye neendawo zokudala, izitulo zicenga ukuba kufundwe iincwadi kuzo, ibhedi yentsimbi yesine ejonge echibini; ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye ne-braai egqibeleleyo- kunye nebala le-sundowner, ukufumana enye yezona ndawo zintle zokutshona kwelanga naphi na.
Indawo egqibeleleyo yezibini ezifuna indawo yabucala, yokuphumla okanye umhambi omnye ofuna indawo ezolileyo yokuyila anokusebenza kuyo. I-cottage isasetyenziswa ngabanini, i-rustic kwaye ilula. Kukho ukufikelela ekuqaliseni i-yacht encinci, ii-piers zokuloba, ukubukela iintaka emanzini ahlambulukileyo, amanzi amnandi ukuba ukhwele iphenyane, impepho ebhudlayo yokusefa iikayiti, iindawo ezintle zokugoba kunye nokufunda incwadi kunye nokutshona kwelanga EMZANTSI AFRIKA. .
Kukho indawo 'i-tanglewood' enomgama ohambahambayo onika isidlo sakusasa esikhulu ngeempelaveki, nje imizuzu emi-2 yokuqhuba ukuya kwibhula elimangalisayo eligcina ezona stakes kunye ne-biltong naphi na, kunye nesikhululo samafutha kunye ne-mini mart kwizinto ezisisiseko. Kukho njengentaphane yeentaka eziphila emanzini ngoko musa ukothuswa kukuva izandi ezithambileyo zeentaka ezingaqhelekanga namasele amancinane mgama.
Ibekwe kufutshane nepropathi ukuba kukho into efunekayo.